Inhlanganiso yePEPFAR Inikeza Isipho Sempahla Yokuzivikela Emikhuhlaneni
HARARE — Uhulumende weMelika usekhiphe imali ezasetshenziswa kunhlelo zezempilakahle zeminyaka emihlanu, kudaba yokwehlisa igciwane evele esikhwameni sePresident Emergency Plan for Aids Relief – PEPFAR. Lokhu kuvezwe ngumsekeli wommeli weMelika elizweni umnumzana Robert Scott emkhosini wokunikezwa kwempahla yokuzivikela emikhuhlaneni yokuthelelanwa phakathi kwezisebenzi lezigulane.
Iqembu lomculo ele Airforce Band yilo elithokozise abekade besemkhosini wokunikezwa kwesipho sempahla yokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwayo okubalisa owofuba, igciwane kanye le hepatitis owenzelwe esibhedlela se Chitungwiza General Hospital lamuhla esivele esikhwameni seMelika sePEPFAR.
Ngasikhathi sinye kuphawulwe okusemthethweni indawo eyakhwe ngabenhlanganiso ye Zimbabwe Infectious Prevention and Control Project ( ZIPCOP ) kusivumelane labe Centre for Disease Control – CDC ( USA ) ukuze isetshenziswe ukuphathisa abaphila legciwane ngesikhathi zizodinga usizo kulesi sibhedlela se Chitungwiza ngenjongo yokwehlisa ukuminyana kwezigulane.
Obengumhlonitshwa kulomkhosi emele uhulumende weZimbabwe umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDr Paul Chimedza uveze ukuba loluhlelo lweminyaka emihlanu lweZIPCOP, oselungene kumnyaka wesibili, lujonge ukuphathisa ukutholisa limpahla yokuzivikela izibhedlela ezilikhulu ( 100 ) elizweni kanye lokuthuthukisa izibhedlela ezilitshumi ( 10 ) eminyakeni emihlanu luqhutshwa.
UChimedza uthi ukuthathelana kwemikhuhlane ethelelanwayo phakathi kwezigulane lezisebenzi zezempilakahle kanye laphakathi kwazo izisebenzi ngokwazo, sekuludubo oselubahlupha bona njengogatsha lwezempilakahle.
Umsekeli womeli weMelika oze emele abe CDC umnumzana Robert Scott uveze ukuba uhlelo lwe PEPFAR ngaphansi kwenhlelo ze CDC Zimbabwe selutholise inhlelo zokwenqatshelwa kokuthelelanwa kwemikhuhlane ezibhedlela olwe ZIPCOP, izigidi ezine zamadollar ezaphathisa njalo ukuthuthukisa indawo eziyisikhombisa okubalisa i SHED esiyakhiwe esibhedlela se Chitungwiza General Hospital esesiphinde satholiswa njalo isicoco se ISO Certification ( Re-certified ).
Kuthi okhokhela uhlelo lweZIPCOP kuleli olusebenza ngokuqondiswa kohlangothi lwezokucubungula i Biomedical Research and Training Institute ( BRTI ), u Proffessor Val Robertson uthi kuqakathekile ukuba bavikelwe kumikhuhlane ethelelanwayo abasebenza ezibhedlela ukuze labo banelise ukuvikela izigulane.
Loluhlelo lwe Personal Protetictive Equipment ( PPE ) oselungene kumnyaka wesibili, lutholiswe inkulungwane ezingamatshumi amane zamadola- $40,000, esisetshenziswe ukuthenga impahla edingakalayo yokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwayo phakathi kwezisebenzi ezibhedlela lezigulane okufana lowofuba -TB, igciwane kanye lowe hepatitis.
Izibhedlela ezilitshumi ezitholiswe usizo lwempahla yokuzivikela, enikezwe emkhosini walamuhla zibalisa, eseMutoko, Wilkins, Mtawatawa, Kadoma, Mt Darwin, St Alberts, St Michael, Sadza, Bindura leKwekwe.
Umkhosi walamuhla ungenwe zinkokheli zikahulumende,inkokheli zezibhedlela ezitholiswe uncedo lwempahla yokuzivikela, inkokheli yesibhedlela se Chitungwiza General Hospital, abameli benhlanganiso ezitholisa usizo kugatsha lwezempilakahle kanye labehofisi yommeli weMelika kuleli.